Windows 10 KB4601382 (20H2) yave kubuda nekuvandudza
February 25, 2021 by bartez64
Windows 10 KB4601382, inova chikamu cheFebruary 2021 chigamba kutenderera, iko zvino kwave kutenderera kuenda kumaPC pane vhezheni 20H2 na2004. Kune avo vanoda kunyorera iwo manyore, nongedzera kurodha pasi kurodha Windows 10 KB4601382 offline installers anowanikwawo.
Windows 10 KB4601382 ndeye inosarudzika yekuvandudza uye inogona kuiswa nekunyanya kudzvanya pane 'Dhawunirodha uye gadza' bhatani mune Zvirongwa app. Kusiyana neyekupedzisira yekudzoreredza yekuburitsa iyo yakaburitswa muvhiki yechipiri yaFebruary, iyi inouya nerurefu runyorwa rwezvigadziriso zvezvipenga zvezvinhu zvakakosha zvakataurwa mumwedzi mishoma yapfuura.
Iwe unofanirwa kukwanisa kuwana chigamba nekuenda kune Zvirongwa> Kwidziridzo & Chengetedzo> Windows Kwidziridzo> Wona sarudzo dzekuda. Mune iyo Zvirongwa app, iwe uchaona chinotevera chigamba chakakwenenzverwa pasi pe "Zvingasarudzika mhando yekuvandudza inowanikwa" chikamu:
2021-02 Cumulative Ongorora Ongororo ye Windows 10 Shanduro 20H2 yeX64-based Systems (KB4601382)
Kuchengeta uye kuisa Windows 10 Vaka 19042.844 (vhezheni 20H2 / 2004), ingo tevera matanho aya:
Vhura Zvirongwa> Kwidziridzo & Chengetedzo> Tarisa uone zvekuvandudzwa.
Dzvanya paKuona sarudzo dzekuwedzera.
Sarudza chigamba chaunoda kuisa uye unselect madhiraivha
Dzvanya pane 'Dhawunirodha uye gadza'.
Dzvanya pane 'Tangazve izvozvi'.
Mune zvimwe zviitiko zvisingawanzoitika, matanho ari pamusoro anogona kusashanda kana paine dambudziko ne Windows Kwidziridzwa Service uye kumisikidza zvinokundikana. Kune avo vakawirwa nenjodzi, unofanirwa kuenda kuMicrosoft Kugadziridza Catalog kubva kune zvinongedzo zvakapihwa pazasi, nyora iyo KB nhamba yeiyo yekuvandudza mubhokisi rekutsvaga.
Paunenge wapedza, tora iyo yekumira yega yekuparadzira package mune chaiyo fomati uye tinya kaviri pa .msu faira kuti umhanye. Iwe unogona zvakare kuyedza isipo yekumisikidza kana iwe uine akawanda madhijitari uye iwe usingade kurodha chigamba chemushini wega wega.
Dhawunirodha maLinks e Windows 10 KB4601382
Windows 10 KB4601382 Direct Download Zvinongedzo: 64-bit uye 32-bit (x86).
Windows 10 KB4601382 (Vakai 19042.844) Full Changelog
Mune zvinyorwa zvekuburitsa, Microsoft yakasimbisa kuti iyo yekutarisa yekutarisa inouyawo nekuvandudzwa kwe sevhisi yekusevha, iyo yakarerutswa kutanga kwemwedzi uno.
Izvi zvichavandudza chinhu chakagadzirirwa kuisa Windows Kwidziridzo uye zvakare ichave nechokwadi chekuti mudziyo wako une yakavimbika servicing stack kuitira kuti igone kugamuchira zvechimbichimbi zvigamba nekukurumidza.
Kune avo vachiri kushandisa Internet Explorer, Microsoft inoti yakagadzirisa nyaya uko kuyeuka kwekurangarira kune ruzivo.
Microsoft yakagadzirisawo nyaya inodzivirira maapplication ema desktop (Win32) kubva kuvhura pane maakaundi ese evashandisi. Imwe bhagi yakagadziriswa panotarisirwa masikirini panguva yekumisikidzwa kwe Windows Kunze kweBhokisi Rakaitika (OOBE).
Windows 10 Vaka 19042.844 ichagadzirisa nyaya neiyo Zvirongwa app uko zvisiri izvo zororo renhamba nhamba dzinoratidzwa kune HDR-inogoneswa monitors.
Saizvozvowo, iyi sarudzo yekuzvisarudzira yakagadzirisawo nyaya inogona kudzivirira mamwe maapplication kuvhura kana vachivimba neOverGL. Kune low-latency monitors, Microsoft iri kutarisa kutamba kwevhidhiyo uye Desktop Windows Mamaneja (DWM) nyaya.
Rangarira kuti iyi imwe sarudzo yekuwedzera yekuwedzera uye iwe unogona kugara uchisvetuka kuti uwane izvi zvigadziriswe muPatch Chipiri chinotevera, icho chakarongerwa munaKurume 9, 2021.
The post Windows 10 KB4601382 (20H2) yave kubuda nekuvandudza yakatanga kutanga Windows tsva
Microsoft Security Updates February 2018 kubudiswa
Microsoft Windows Kuchengetedzwa Kuvandudza Ndira 2021 kuongorora
Microsoft Windows Security Kuvandudza Kubvumbi 2018 kuburitsa kuongorora
Microsoft Windows Kuchengetedzwa Kugadziridza Mbudzi 2020 kuongorora
Microsoft Windows Kuchengetedzwa Kugadziridza June 2019 kuongorora
Microsoft Windows Kuchengetedzwa Kugadziridza Zvita Zvita 2019 kuongorora
Dhawunorodhi: MIUI 11 yakagadziridzwa yakagadziriswa inodhonza kunze kune akati wandei Xiaomi uye Redmi zvishandiso!
Filed Under: Windows Tagged With: Windows 10, Windows Update